Mihoatra lavitra noho ny fanatanjahan-tena izay tanjona hampiakatra ny lanja, ny fibatana fonjam-by mila fifehezana, fanomanana ary teknika be dia be amin'ny fampiharana azy. Ny fanatanjahantena, izay fomba fanao Olaimpika mihitsy aza, dia mitaky fanoloran-tena tanteraka amin'ny atleta sy fiofanana an-taonany maro hahazoana vokatra tsara.
Amin'ity lahatsoratra ity isika dia hiresaka bebe kokoa momba ny fampiakarana lanja, ny fitsipiny ary ireo firaketana lehibe tratra miaraka aminy. Hasehontsika koa fa tsy ny lehilahy irery no mampihatra izany fanatanjahantena izany. Tena malaza eo amin'ny vehivavy koa izy. Zahao hoe:
Ny fampiakarana lanja ho endrika fifaninanana dia nanomboka tamin'ny sivilizasiôna taloha, izay misy ny firaketana an'io fanao io ataon'olona. Na izany aza, tamin'ny faran'ny taonjato faha-6 no nisy ny fifaninanana ofisialy sy tompon'andraikitra voalohany manerantany. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy afa-tsy mpifaninana XNUMX.
Fanatanjahan-tena izany amin'ny ankapobeny izay ifaninananan'ny mpifaninana izay afaka mampiakatra ny lanjany indrindra amin'ny fampiasana dumbbells. Mizara ho dingana ny fifaninanana, ary rehefa mivoatra izy, dia nitombo ny lanjany mandra-pahatongany amin'ny fotoana izay mpifaninana iray monja no afaka mampiakatra kilao maromaro, ary ilay iray no heverina ho tompon-daka.
Fanondranana entana ho an'ny sembana
Araka ny hitantsika ao amin'ny Paralimpika, ny fiakarana lanja dia fanatanjahan-tena izay ampiharin'ny olona manana fahasembanana, indrindra ireo manana olana amin'ny motera amin'ny tongony.
Na izany aza dia ampiharina amin'ny fomba hafa. Tsy toy ny fomba tsy misy kilemaina, izay anesorana ny lanja amin'ny toerana mahitsy, amin'ny fomba maotina, io fiakarana io dia atao mandry amin'ny lamosina miaraka amin'ny tongotra mifatotra.
Na eo aza ny fampiharana ataon'ny olona tsy afa-mihetsika voafetra dia tsy voafetra loatra ny lanjany. Ny mpifaninana dia manainga lanja izay manaitra tokoa. Ny rakitsoratra momba ny modaly Paralympika dia napetraka amin'ny 291kg ankehitriny. Be loatra izany.
Mahahendry ny lehilahy. Ny fanandratana lanja ho an'ny vehivavy dia nanjary malaza kokoa ary ny isan'ny vehivavy mpankafy dia mitombo ihany. Saingy tantara izany, ny vehivavy dia manana fahasahiranana bebe kokoa amin'ny fampiharana zavatra izay fanaon'ny lehilahy teo aloha ihany, ary tamin'ny 1996 vao nanaiky ny firaisana ara-nofo vehivavy tamin'ny ady lehibe manerantany.
Te hahafantatra bebe kokoa? Vakio bebe kokoa ny atiny ao amin'ilay lahatsoratra hoe Hypertrophy Vehivavy!
Fitsipika fampiakarana lanja
Araka ny nolazaiko teo am-piandohana, ny fampiakarana lanja dia tsy ny fampiakarana lanja fotsiny, fa manana lalàna henjana be izay tsy maintsy arahana. Ny sasany amin'izy ireo aza dia miantoka ny tsy fivadihan'ny atleta, satria mampidi-doza ilay fanatanjahan-tena, rehefa atao ratsy.
Ny fitsipiky ny fifaninanana dia manaraka endrika roa amin'ny fampiakarana lanja, ny fakana an-keriny sy ny fanipazana. Ao amin'ny haingam-pandeha, ny mpifaninana dia tsy maintsy mampiakatra ny dumbbells amin'ny hetsika tokana sy ambonin'ny lohany, tsy misy fiatoana. Raiso amin'ny toerana mahitsy ny gorodona ary atsangano indray mandeha ambonin'ny lohanao izy.
Amin'ny maodely fanipazana, ny atleta dia tsy maintsy manandratra ny lanjany aloha hatreto amin'ilay faritra ambonin'ilay tratra ary avy eo atsanganany ambony lohany, toy ilay teo aloha ihany. Amin'io fotoana io dia tokony ampifanarahiny ny tongony ary tazony amin'ny toerana mitovy ny lanjany mandra-pahatonga ny mpitsara manoro hevitra fa natao tsara ny hetsika. Tamin'izay no nilatsaka tamin'ny tany ny lanjan'izy ireo ary nitaraina mafy.
Andao hiresaka nomerao manaitra. Tonga izao ny fotoana hihaonana amin'ireo firaketana avo indrindra amin'ny fanandratana. Mahagaga tokoa ny manavesatra entana rehefa mieritreritra ianao fa olona io, tsy nisy fanampian'ny artifice rehetra, izay nanainga azy ireo. Ny firaketana dia isaina ho toy ny fitambaran'ireo fanazaran-tena roa voalaza etsy ambony, izay tsy maintsy atao, ny fisintomana ary ny manipy.
Ny mpihazona lehilahy firaketana ankehitriny dia nitantana ny totalin'ny 472,5kg nakarina, nanampy 210kg tao anaty manipy ary 262,5kg tamin'ny voalohany. Hossein Rezazadeh no anarany ary izy dia avy any Iran izay toerana fantatra amin'ny anarana hoe Hercules. Tsy mahagaga, sa tsy izany?
Tatiana Kachirina, vehivavy manana ny firaketana an-tsoratra ankehitriny, avy any Russia, miaraka amin'ny 348kg no nakarina, mitontaly 155kg eo am-piandohana ary 193kg kosa no atsipy. Ny rakitsoratra dia nahatratra tamin'ny taona 2014 tao amin'ny tanànan'i Almaty any Kazakhstan.
Na eo aza ny isa, nilaza ireo mpitsabo fa tsy mampidi-doza ny fampiakarana lanja raha ampiharina amin'ny fitaovana mety sy ao anatin'ny teknika ihany koa.
Na izany aza, nahita tranga mpifaninana izay naratra mafy isika nandritra ny fampiakarana lanja. Noho izany, raha te-hampihatra ilay fanatanjahantena ianao dia miezaha haka fampahalalana ampy mialoha mba hahazoana antoka fa tsy hivadika amin'ny vatanao ianao.